Umlambo ophakamileyo, ubunjani kunye nemifanekiso | Ukuhamba kwe-Absolut
Umlambo ophakamileyo, indalo kunye nemifanekiso
maruuzen | 28/06/2021 14:08 | Ukuhlaziywa ukuba 28/06/2021 15:09 | Khanada
Canada Lilizwe elinemihlaba emihle kakhulu, ngakumbi ukuba uyalithanda ikhadi leposi elinamachibi, iintaba, imilambo kunye namahlathi. Indawo entle ngokukhethekileyo Umlambo ophakamileyo.
Umlambo ophakamileyo yindawo yase-Alberta, malunga neekhilomitha ezingama-54 ukusuka kwisixeko saseCalgary, kwaye idume kakhulu kuba apha uthotho lweTV kunye neemovie ziye zathathwa. Kulungile, kwi-High River kukho indalo kunye nokufota.
1 Umlambo ophakamileyo
2 Ukhenketho lwe-Heartland kuMlambo oPhakamileyo
Ibizwa ngokuba ngumlambo owela esixekweni. Abahlali bokuqala baseYurophu bafika malunga nesiqingatha sesibini senkulungwane ye-XNUMX, ikhula kancinci kancinci ngesandla sandiswa nololiwe, kodwa yafumana inkqubela yokwenene ngamaxesha eMfazwe yeHlabathi yokuQala. Kungelo xesha ke apho kwasekwa amashishini.
Ngethamsanqa, olu phuhliso aluzange lubushiye ubuhle bendalo esingqongileyo kunye nomoya okhethekileyo we "Idolophu encinci" ukuba akazange amshiye. Ungazibona iiRockies elundini phaya, kwaye, awunakuqhuba kangangesiqingatha seyure kwesona sixeko sikufutshane.
Ngapha koko, namhlanje, ukusuka eCargary, ukhenketho lucwangcisiwe kule dolophu intle incinci yaziwa njenge «Ikhaya le Heartland », ngokuchanekileyo kuba yindawo yokubonisa bhanyabhanya kuthotho lweCBC oludumileyo: Heartland.
I-Heartland luthotho olwenze uMlambo oPhakamileyo wathandwa. Olu luhlu lujikeleza kubomi bosapho lwelizwe, amahla-ndinyuka alo kwimisebenzi yezolimo, yosapho kunye nentliziyo. Ngenye yeenkqubo zeCBC Elona xesha lide libalekayo kunye nokufota kwahlulwa phakathi kweeseti eCalgary kunye ne-studio yeefama e-Heartland.
Ukhenketho lwe-Heartland kuMlambo oPhakamileyo
Njengoko besitshilo ngaphambili, Umlambo ophakamileyo sisiqingatha seyure ukusuka eCalgary Ke nokuba uqesha ukhenketho okanye uye wedwa. Ukufota kwenzeka ngoMeyi ukuya ekuqaleni kukaDisemba kwaye xa abantu beTV befika, yonke into iyaguqulwa. Uluntu oluncinci lokubalisa amabali lungena kumandla kamabonwakude.
Abalandeli be-Heartland kufuneka baqale ukhenketho lwe-Hudson Imyuziyam yaseHighwood. IZiko loLwazi ngeNdwendwe lisebenza ngaphakathi kule myuziyam kwaye wonke umntu uyazi malunga nokufota ukuze ukwazi ukuthatha ithuba kwaye uncokole nabo ngothotho. Emva kwemyuziyam kupakwe trailer Ke ukuba kukho ukufota, uya kubona umsebenzi othile onomdla.
Ngapha koko, imyuziyam iyathandeka ngokwayo kuba isebenza kwisitishi esidala, esidala saseCanada Pacific Station. Kwaye kunomdla kuba kukho umboniso ongajonganga kwi-Heartland kuphela kodwa nakwezinye iimuvi okanye uthotho lwefilim kwindawo efana Fargo, Umnqophiso okanye ukungaxolelwa.
Kwiindwendwe ze-Heartland zinokubona uninzi lwesinxibo esivela kuthotho kunye nezinto ezibalulekileyo kwimbali, ezinje ngendlu kanodoli ukusuka kwixesha le-7. Kananjalo, kwabona banenzondelelo yempambano, kukho umbuzo kunye nempendulo yomdlalo obeka ubungqina. Ewe kunjalo, kukho ivenkile yezipho apho ungathenga khona ii-baseball caps, amaphephandaba, imihombiso yomthi weKrisimesi kunye nokunye.
Ibhloko enye evela kumyuziyam yile Abahamba ngeWestern Wear, ithengiswa phi ukuthengisa ngokusemthethweni kolu ngcelele, ezinje ngeesweatshirt, izikipa okanye iikhalenda. Kwi-Olive & Fincha, enye ivenkile, bakwathengisa izinto ezinxulumene noluhlu, kubandakanya iimeko ze-iPhone. Le venkile ikwi-3rd Avenue kwaye esi sitrato sihlala sivela kwimbali kamabonwakude, ke uziva uyinxalenye ...
Kwesi sitalato kukwakho Isidlo sangokuhlwa sikaMaggie, el isidlo zothotho. Ngokucacileyo, ayisiyokwenyani, kodwa ungasoloko ukroba kwiglasi kwaye ujonge iseti kunye nokusebenza kwayo okuntsonkothileyo. Umnyango olandelayo yi-Bartiling kunye ne-Sons Mercantile kunye ne-Hudson's Antique Mall.Kwaye kancinci kwiVan Born Travel Agency enefestile yayo enomtsalane, ilungele ukufota. Ngapha kwesitalato iiofisi zeHudson Times kwaye bahambisa amaphepha-ndaba asimahla.
Enye ibhloko yi4th Avenue. Nantsi Ikofu kaCollosie, kunye nokuveliswa kwayo ngobuchule kwevanilla kunye nesiraphu ye caramel Bayonwabile, batsho. Ngaphandle kolunye udonga lwangaphandle lwendawo yokutyela lupeyintwe njengebhodi emnyama ukuze umntu ashiye imemori yabo apho. Ecaleni kwale cafe nguMemori Line kaEvelyn, ibha encinci ethandekayo enika iayisi khrimu emnandi kunye neesandwich kwaye inehombiso ye-retro.
Emva koko, ewe lixesha lokuba uphume uhambe uhamba ngezitalato ezininzi. Ngexesha elithile amanyathelo ethu aya kusikhokelela Ipaki yaseGeorge Lane, indawo ekhethwe sisikolo samabanga aphakamileyo ukuba babambe umsitho wabo wokuthweswa izidanga, into ebonakala kuthotho lweTV ngokunjalo. Ipaki ine-gazebo entle kunye nenxalenye esebenza njengendawo yokumisa inkampu apho unokumisa khona intente yakho ukusuka ngoMeyi 1 ukuya kuSeptemba 30.
Isitalato esikhokelela kwipaki yi-5th Avenue kwaye esiphelweni sayo, ngqo ngqo nembali yeWales Theatre, yiyo IHotel High Motor Motor Ihotele. I-motel encinci kunye neklasikhi ebonakalayo kokubini kuthotho ebesithetha ngalo nakwimuvi Fubar. Ukuthatha iifoto kubalulekile.
Nangona iHigh River isetyenziswa kakhulu kumzi mveliso wokuzonwabisa, ipesenti enkulu yokufota kwenziwa kwifama eseNtshona yeMillarville. Yindawo eyimfihlo ke ngoko umntu akanakufikelela kuyo, kodwa iMillarville, enye le dolophu, ikwanembali yayo, yiyo loo nto iindawo zayo zinxulumene nomdlalo bhanyabhanya kunye nomabonakude.
Ukubuyela kwi-High River kunye ne-Heartland enye Awukwazi ukuhamba ngaphandle kokukhwela. Uthotho lweTV lujikeleza amahashe ngoko ke akunakwenzeka ukuba ushiye ngaphandle kokuzama kancinci. Ke sinokwenza ukukhwela ihashe kwaye yiba ngu inkwenkwe Ixeshana. I-Anchor D Outfitting Ranch ibonelela ngokugibela ihashe kunye nokuqeshisa iikhabhathi.
Oku kukhwela kuphinda kabini ngemini, yonke imihla, kubantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka emithandathu nangaphezulu. Ukuhamba kusebenza njengesingeniso kubomi beenkomo kodwa nokwazi indalo entle ejikeleze uMfula oPhakamileyo, iiRockies zibandakanyiwe.
Ke ukuba uya eCanada okanye ukuba ulandela la manqaku athandwayo kwi-intanethi, gcinani engqondweni ukuba ninokwenza utyelelo olukhulu koku dolophu yaseKhanada.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Umlambo ophakamileyo, indalo kunye nemifanekiso
Iingcinga malunga neIndiya